गङगबुमा सुटकेश भित्र भेटियो मान्छेको खुट्टा र टाउको।अनुसन्धान भइ रहेको छ भन्छन प्रहरी। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
गङगबुमा सुटकेश भित्र भेटियो मान्छेको खुट्टा र टाउको।अनुसन्धान भइ रहेको छ भन्छन प्रहरी।
रेडियो झापा 100.7 MHz. आइतबार, साउन २५, २०७७ १८:०२:०८
२५ साउन,काठमाडौ/आइतबार बिहान गोंगबु चोकबाट उत्तर–पश्चिमतर्फको ५०० मिटर दूरीमा एउटा सुटकेश भेटियो । पर्किङ गरेर राखिएको एक ट्याक्सी र मारुती भ्यानको बीचमा थियो सो, सुटकेश । उक्त सुटकेशलाई बाहिरबाट रातो प्लाष्टिकले बेरिएको थियो ।
‘सुटकेश नजिक गएर हेर्दा आसपासमा आलो रगतका टाटा देखें,’ खड्गीले बताए, ‘रगत देखेपछि १०० मा फोन गरेर प्रहरीलाई र वडा कार्यालयमा खबर गरें ।’
राति १ बजे आवाज आएको थियो खड्गीका अनुसार उक्त स्थानमा राति १ बजेको समयमा ड्याङ आवाज आएको थियो । घर अगाडि पसल भएको कारण तोडफोड भयो कि भनेर उठेर समेत हेरेको खड्गीले बताए । उनले भने, ‘२ जना मान्छे चाहिँ देखेको थिएँ । राती ट्याक्सी र गाडी पनि त्यही थियो ।’
हत्या अन्तै भएको हुनसक्छ घटनास्थलमा प्रहरीले सेतो बोराको नाम्लो समेत बरामद गरेको छ । अन्त हत्या त्यहाँ नाम्लाले बोकेर ल्याएर त्यहाँ फालेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान बाट खुलेको छ । एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘यद्यपी गाडीमा ल्याएर फालेको भए नाम्लो किन प्रयोग गर्थ्यो होला र ?’
घटनास्थल वरपर सीसीक्यामेरा छैन शव भेटिएको विपरित दिशामा सर्लाही होलसेल किराना पसल र पोखरा टप ज्वेलर्स रहेको छ । शव फेला परेको ठाउँ दुईवटा बाटोबाट पुगिन्छ । तर, उक्त एरियाभित्र कतै पनि सीसी क्यामेरा छैन ।
प्रहरी भन्छ, ‘उक्त क्षेत्रमा कतै पनि सीसीक्यामेरा छैन । बाहिरी सडकमा भएपनि भित्र गल्लीमा नभएकाले अनुसन्धनमा गाह्रो हुनसक्छ ।’ प्रहरीले धेरै जसो घटना सीसीक्यामेराको सहयोगबाट सुल्झाउने गरेको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपक थापाले ती पुरुष केही दिनदेखि सम्पर्क बिहीन भएको खुलेको बताएका छन् । यद्यपी ती व्यक्तिको पहिचान उनले खुलाएका छैनन् । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै प्रहरीले थप बोल्न मानिरहेको छैन ।